Wararka Maanta: Khamiis, Mar 26, 2020-Safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda oo qabatay kulan ku saabsan iska wacyi galinta cudurka Corona virus
Jaaliyadda oo kaashanaysay Dhaqaartiirtaa Soomaaliyeed ee degen Uganda, ayaa la wadaagtay jaaliyada, waxa uu yahay Coronavirus ama (COVID-19), meesha uu ka soo farcamay, sida uu ku faafay, sida loo kala qaado iyo sida looga hortagi karo.
Qunsulka Safaarada Somalia ee Uganda Mudane Jibril Afyare oo ahaa qabanqaabiyihii kulankaan ay tusaale ahaan la wadaagay jaaliyadda sida saxda ah ee loo dhaqo gacmaha iyo loo xirto maska wajiga oo ka mid ah talaabooyinka ka hortaga caabuqa Coronavirus.
Qunsulka Safaaradada Soomaliya ee Uganda mudane Jibril Afyare waxuu ugu baaqay kulana dardaarmay jaaliyada Uganda in fiiro gaar ah iyo ka warqab ay siiyaan waayeelka, caruurta, hooyooyinka iyo maatada maadama la xadiday banaan bixida iyo isku socodka guud.
Mudane Jibril Afyare waxa uu faray jaaliyada in mar walba la adeeco loona hogaansamo sharciyada dalka ee ay martida u yihiin iyo amarada ka soo baxa dowlada Uganda.”
Soomaalida ku nool qurbaha ku nool ayaa maalmahan kamid ahaa dadka uu saameeyay cudurkaan, waxaana arrintaan sabab looga dhigay iyadoo Soomaalidu aanay qaadan talooyinka wadamada ay ku nool yihiin.